चिनियाँ एक्सप्रेस वे, जहाँ प्रतिघण्टा १०० किमिमा गुड्नेछन् सवारीसाधन !
तस्बिर : रासस/सिन्ह्वा
दक्षिण चीनको गुआंगसी झुआंग स्वशासित क्षेत्रमा बन्दै गरेको जिंग्सी लंगब्यांग एक्सप्रेसवेको आकाशबाट खिचिएको दृश्य ।
यो एक्सप्रेसवेले भियतनामसँगैको जिंग्सी र लंगब्यांग बन्दरगाह जोड्नेछ भने यसको निर्माण करिब करिब पूरा भएको छ । यही वर्षको अन्त्यतिर खुल्ला गरिने यो बाटोको लम्बाइ २८.३ किमि रहेको छ भने यसमा सवारीसाधनले प्रतिघण्टा १०० किमिका दरले गुड्न पाउनेछन् ।
'सरकार ! अहिलेको भाडाले जीवन चल्दैन, वैज्ञानिक भाडा समायोजन गरिदिनुहोस् !'
राजधानीको मैतीदेवीस्थित सडकमा सरकारलाई भाडा बढाइदिन माग गर्दै लेखिएको प्लेकार्ड टाँसिएको एक भाडाको ट्याक्सी यात्रुको प्रतीक्षामा ।
सुनामीले घरबार लगेपछि ...
सोमबार, डिसेम्बर २४ मा लिइएको दृश्यमा इण्डोनेसियाको सुमुरमा सुनामीले तहसनहस पारेको घरको भग्नावशेष छेउमा भर्खरै गएको सुनामीमा बाँचेकी एक महिला । एक्कासि आएको सुनामीले सयौँ इण्डोनेसियालीको मृत्यु भएको थियो । सरकारी
खुर्सानी खाने प्रतियोगिता ! (फोटोफिचर)
आइतबार मध्यचीनको जिआंग्सी प्रान्तमा रहेको यिचुन सहरस्थित वेंगटांग टाउन क्षेत्रमा खुर्सानी खाने प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै मानिसहरु । यस प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले १ मिनेटमा २० वटा खुर्सानी खाएका थिए ।